देशलाई दिउसै अध्यारोमा राख्ने बिजुली माफियाहरुको फेहरिस्त यस्तो छ-सेयर गरेर भण्डाफोर गरौँ! ~ Khabardari.com
देशलाई दिउसै अध्यारोमा राख्ने बिजुली माफियाहरुको फेहरिस्त यस्तो छ-सेयर गरेर भण्डाफोर गरौँ!
प्राधिकरण भजाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने र स्वार्थ पूर्ति गर्ने माथिदेखि तलसम्मका करिब १५० जना भन्दा बढीलाई कारवाही हुने अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ऊर्जा मन्त्रालयले एक उपकार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा प्राधिकरणमा हालसम्म भएका क्षति तथा अवरोधको विषयमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । सो अध्ययन समितिले प्रतिवेदन दिएपछि सोही प्रतिवेदनका आधारमा कर्मचारी रहेकालाई विभागिय कारवाही गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाउने र कर्मचारी नरहेकालाई भने तत्काल नै अख्तियारलाई जिम्मा लगाउने तयारी गरिएको छ । दोषीहरुले प्रमाण नष्ट गर्न नपाउनु भनेर उनीहरुको सुक्ष्म निरिक्षण भइराखेको बताइएको छ ।रातोपाटीबाट